alternating current နှင့် direct current: ကွဲပြားချက်များနှင့်တူညီချက်များ | အခမဲ့ hardware
alternating current နှင့် direct current: ကွဲပြားချက်များနှင့်တူညီချက်များ
ဣဇာက်သည် | 28/09/2021 09:00 | ပညာရေး, ယေဘုယျ
သင် ... သင့်တယ် alternating current နှင့် direct current ကိုခွဲခြားပါမရ။ နှစ်ခုစလုံးသည်အလွန်အရေးကြီးပြီးစက်မှုနှင့်ရောသုံးသည် ပြည်တွင်းအဆင့်မှာ ကိရိယာများစွာကိုအားဖြည့်ရန် စက်မှုသုံးစက်ပစ္စည်းများမှသည်အိမ်သုံးအသုံးအဆောင်များ၊ မိုဘိုင်းလ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားအရာများ အီလက်ထရောနစ်ဒြပ်စင်.
ထို့ပြင်၎င်းတို့နှစ်ခုကြား၌တည်ရှိသောကြောင့်တူညီချက်များကိုသင်သင်ယူလိမ့်မည် DC နှင့် ACစိတ် ၀ င်စားစရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သလိုနာမည်ကျော်တီထွင်သူနှစ် ဦး ကြားရုန်းကန်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ရက်စက်ယုတ်မာမှုများဖြစ်စေခဲ့သည်။
2.2 Polarity ပါ
3 AC ဆိုတာဘာလဲ။
3.1 applications များ
3.2 Polarity ပါ
4 DC နှင့် AC: အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
4.1 AC / DC ပြောင်းလဲခြင်း
una လက်ရှိ ၎င်းသည်ရေစီးတစ်ခုဖြစ်စေ၊ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖြစ်စေအရာတစ်ခုစီးဆင်းသည်။ လျပ်စစ်စီးကြောင်းတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်သည်မှာစပယ်ယာ၏အတွင်းပိုင်းကိုဖြတ်သွားသည်ကိုမမြင်ရလျှင်ပင်အီလက်ထရွန်စီးဆင်းမှုတစ်ခုရှိနေသည်။
ဤ လျှပ်စစ်စီးကြောင်း အခြေခံအားဖြင့်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဘလော့ဂ်ကိုမကြာခဏဖတ်ရင်မင်းသိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် DCCC (သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်လို DC) ဟုအတိုကောက်ခေါ်သည်၊ ဦး တည်ချက်တစ်ခုပါသောလက်ရှိဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအီလက်ထရွန်စီးဆင်းမှုသည်မတူညီသောအလားအလာနှစ်ခုနှင့်လျှပ်စစ်အားသွင်းသည့်အချက်နှစ်ခုကြားရှိစပယ်ယာမှတဆင့်သီးခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လိမ့်မည်။ ငါတို့ကလက်ရှိဂရပ်ကိုဂရပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲဒါကစဉ်ဆက်မပြတ်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်။
အီတလီရူပဗေဒပညာရှင် Alessandro Volta မှဖန်တီးထားသောဘက်ထရီကြောင့်ဤတိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို ၁၈၀၀ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤလက်ရှိစီးဆင်းမှု၏သဘောသဘာဝကိုထိုအချိန်ကကောင်းစွာနားမလည်ခဲ့သော်လည်းအရေးကြီးသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၈၇၀ နှင့် ၁၈၈၀ အစောပိုင်းများတွင်မီးလုံးကိုတီထွင်ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီများနှင့်အိမ်များကိုအလင်းရောင်ပေးနိုင်ရန်ဤလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သောမတ်စ်အက်ဒီဆင်.
ဤပုံစံမျိုးကိုခုခံကာကွယ်ရန် Edison သည်အမှန်တကယ် dantesque ရှိုးများပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားလာသည် Nikola Tesla ကိုအသိအမှတ်ပြုပါသူ၏လက်ရှိအခြေအနေသည် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုဆိုကာ၊ ဒီလိုလုပ်ဖို့အက်ဒီဆင်ဟာမတူညီတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုဓာတ်လိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုလူထုဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ဖို့လာခဲ့တယ်။ ၁၉၀၃ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်လူတစ်ထောင်သည်လျှပ်စစ်ဗို့အား ၆,၆၀၀ ရှိသောဆင်တစ်ကောင်အားသတ်ခဲ့သည်ကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ဆင်သည်၎င်းအားသေစေရန်သေချာစေရန် cyanide အဆိပ်မုန်လာဥများကျွေးမွေးခဲ့သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များအားလုံးကို ရေစီးကြောင်း၏စစ်ပွဲ.
ဒီတိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအစားထိုးခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကိုငါတို့မြင်လိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်၎င်းကိုရုပ်မြင်သံကြားစက်များ၊ ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကိုလျှပ်စစ်ကွန်ယက်မှအလုပ်လုပ်ရန်၊ adapter သို့မဟုတ် power supply ကဲ့သို့အသွင်ပြောင်းအတွက် rectifier devices များကိုသုံးသည်။
alternating current မှာရှိပေမယ့် polarity ပါ ၎င်းသည်အခြေခံမဟုတ်ပါ၊ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းသည်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းပတ်လမ်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်။ မပြိုကွဲလျှင်လေးစားရမည်။ DC ရှိ polarity ပြောင်းလဲခြင်းသည်အချို့ကိစ္စများတွင်ပြောင်းပြန်လှန်ပျက်စီးခြင်းကိုဆိုလိုနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ဤအရာကိုသတိထားသင့်သည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်များနှင့်အမှတ်အသားများတွင်မှတ်တိုင်များသို့မဟုတ်ကေဘယ်များကိုကြည့်လေ့ရှိသည် အရောင်များ အဲဒါကိုခွဲခြားဖို့ ယေဘုယျအားဖြင့်အနီရောင်ကို positive pole (+) နှင့်အနုတ် (-) အတွက်အနက်ရောင်ကိုသုံးသည်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော DC ဆားကစ်အချို့သည်အပိုအရောင်များကိုလည်းထည့်နိုင်သည်။
La AC အCA (သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်လို AC) ဟုအတိုကောက်ခေါ်သည်၊ လျှပ်စစ်ပမာဏသည်အချိန်အခါအလိုက်စက်ဘီးနှင့်လည်ပတ်မှုကွဲပြားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဂရပ်ဖစ်အတွက်မျဉ်းဖြောင့်ဖြစ်သော CC နှင့်မတူဘဲ၎င်းကိုတစ်လှည့်စီ၏အမှု၌ sinusoidal oscillation အဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင်ပြီးမြောက်နိုင်သောသံသရာအရေအတွက်သည်စက်ဝန်း၏ကြိမ်နှုန်းပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဥရောပ၌ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၅၀ Hz (သို့) တစ်စက္ကန့်လျှင်အဆ ၅၀ ရှိသည်၊ အမေရိကန်၌၎င်းသည် 50 Hz တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Pixii ကိုဖန်တီးမည့်အခါဤရေစီးကြောင်းသည် ၁၈၃၂ တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည် ပထမဆုံး AlternatorFaraday အခြေခံမူများပေါ်တွင်အခြေခံသော dynamoelectric generator တစ်ခု။ နောက်ပိုင်းတွင် Pixii သည်ရှေးခေတ်၌ပိုမိုအသုံးပြုခဲ့သော direct current ထုတ်လုပ်ရန် switch တစ်ခုကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၁၈၅၅ တွင် AC သည် DC ထက်သာလွန်ပြီး၎င်းကိုအစားထိုးခဲ့သည်။
Alternating current နည်းပညာရှိခဲ့ဖူးတယ် ဥရောပ၌ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်၁၈၅၀ တွင် Guillaume Duchenne ၏ကျေးဇူးကြောင့် ၁၈၇၆ တွင်ရုရှားအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး သည် Edison's နှင့်ဆင်တူသော high voltage AC ဖြင့်အလင်းရောင်စနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Budapest ရှိ Ganz Works ကုမ္ပဏီသည်ဤအခြေခံမူများပေါ်တွင်အခြေခံသောအလင်းရောင်သုံးပစ္စည်းများကိုစတင်ထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။
ဆားဗီးယားအင်ဂျင်နီယာနှင့်တီထွင်သူ Nikola Teslaအက်ဒီဆင်၏သန္တာန်ကိုဆန့်ကျင်သောဤလက်ရှိအကြီးမြတ်ဆုံးကာကွယ်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုအလှည့်ကျစက်ပြင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သောပထမဆုံး alternating current induction motor ကိုဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤပါရမီသည်လိုင်းအားမပြောင်းလဲဘဲဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များကိုပြီးပြည့်စုံစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Tesla သည်ဥရောပအင်ဂျင်နီယာများတီထွင်သောကိရိယာတစ်ခုကိုစုံစမ်းခဲ့သည် ထရန်စဖော်မာမရ။ ၎င်းအား ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းသည်အနိမ့်ဗို့အားသို့ပြောင်းသွားပြီးအိမ်များအတွက်ပိုလုံခြုံစေသည်၊ ၎င်းအားထုတ်လုပ်သည့်ပမာဏသို့ရောက်ရန်မလိုဘဲ၊ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမှာကြောက်စရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏အန္တရာယ်များဖြစ်သည်။ ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည်ခေါ်ဆိုမှု၏အစဖြစ်လိမ့်မည် ရေစီးကြောင်း၏စစ်ပွဲ.
Nikola Tesla ၏ CA နှင့်သက်ဆိုင်သောမူပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုကုမ္ပဏီအားပေးအပ်ခဲ့သည် Westinghouse လျှပ်စစ်အရင်းအနှီးမြှင့်ရန်နှင့်ဤလမ်းကြောင်းပေါ် အခြေခံ၍ စီမံကိန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဤနောက်တွင်ပထမဆုံး CA ၏ဆင်ခြေဖုံးကူးစက်မှုသည် ၁၈၉၁ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လအနည်းငယ်အကြာဥရောပ၌ Lauffen မှ Frankfurt (ဂျာမနီ) အထိ Telluride (Colorado) ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။
AC အောင်ပွဲခံပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ပျံ့နှံ့သွားသောအခါ Thomas Edison သည် direct current အတွက်ကုမ္ပဏီအားဆက်လက်ရပ်တည်စေပြီးကုမ္ပဏီအတွက်သူ၏ရာထူးကုန်ကျစရိတ်ကိုဖြစ်စေသည်။ အက်ဒီဆင်လျှပ်စစ် (ယခု General Electric) ဟုသူကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ခဲ့သော ...
Alternating current ကိုသုံးပါတယ် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နှင့်အိမ်အတွက်၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများပို့ဆောင်ရန်ဓာတ်အားလိုင်းများမှတဆင့်ခရီးသွားလာသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ မော်တာများ၊ စက်မှုသုံးစက်များ၊ အအေးပေးစနစ်များနှင့်အခြားအရာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲမင်းaကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါ ပလပ်ဂ်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၎င်းအားမည်သို့နေရာချမည်ကိုသင်သတိမပြုမိပါ။ ၎င်းသည် alternating current ၏လှိုင်းပုံစံကြောင့်၎င်းသည်အခြားသို့ပြောင်းလိမ့်မည်။ သို့သော်သမားရိုးကျတပ်ဆင်မှုများအတွက်ဝါယာကြိုးများကိုခွဲခြားရန်နည်းလမ်းများလည်းရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်တွင်မြေ၌ရှိသောအဝါရောင် / အစိမ်းရောင်ဝါယာကြိုးရှိသည်၊ အပြာရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဝါယာကြိုးသည်ကြားနေဖြစ်လိမ့်မည်၊ အညိုရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်သည်အဆင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
DC နှင့် AC: အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
နှစ်ခုလုံးကို၎င်းတို့ကဲ့သို့ယနေ့ထိတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည် ၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို။ ဥပမာ:
Alternating current သည် direct current နှင့်မသက်ဆိုင်သောအရာအားပြောင်းလဲရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ဗို့အားကိုပြောင်းရန်လျှပ်ကူးပြောင်းရန်သင်ရိုးရိုး Transformer ကိုသုံးရန်လိုသည်၊ ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော်လည်း dynamos (သို့) generators များကို series နှင့်လက်တွေ့ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။
Joule effect နှင့် eddy currents (သို့) hysteresis ကဲ့သို့ eddy currents များကဲ့သို့အပူသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်မျှသာရှိသောအကွာအဝေးများကို alternating current ကိုဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ DC သည်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများရှိနေသော်လည်းလိုအပ်ချက်များနှင့်နီးစပ်သောဓာတ်အားပေးစက်ရုံများစွာလိုအပ်လာလိမ့်မည်။
AC / DC ပြောင်းလဲခြင်း
(power supply ကိုကြည့်ပါ)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ပညာရေး » alternating current နှင့် direct current: ကွဲပြားချက်များနှင့်တူညီချက်များ
Switched source: အဲဒါဘာလဲ၊ linear နဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲ၊ အဲဒါအတွက်လား
Transistor တစ်လုံးကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြသည်